In ka badan 100 Xuutiyiin ah oo lagu dilay magaalada Marib ee dalka Yemen – Radio Muqdisho
In ka badan 100 Xuutiyiin ah oo lagu dilay magaalada Marib ee dalka Yemen
in Afrika, Caalamka, Wararka
24-kii saac ee la soo dhaafay ayaa dagaalo xoogan iyo duqeymo ka dhacay magaalada Marib lagu dilay 115 ka tirsan xuutiyiinta ka dagaalanta dalka Yemen sida ay shaacisay Warbaahinta dalka Boqortooyada Sacuudiga.
“14 ka mid ah gaadiidka dagaalka ayaa la bur buriyay, halka 115 ka mid ah kooxda Xuutiyiinta lagu dilay weerarka 24-kii saac ee la soo dhaafay duqeymo ka dhacay degmada Sirwah, ee magaalada Marib ee Waqooyiga Gobolka Al-Jawf”. Ayaa lagu sheegay bayaan ka soo baxay boqortooyada Sacuudiga.
Xulufada Carabta ee taageeraya Dowladda Yemen ayaa weeraro xagga cirka ah oo ay ka geysteen dalkaasi saddexdii todobaad ee la soo dhaafay ku dilay 2, 600.
Dagaalka Yemen oo bilowday 2014-kii kadib markii kooxda Xuutiyiinta ay qabsadeen magaalada caasimadda ah ee Sanca, ayaa waxaa lagu guuleystay in dalalka Carabta oo ay horkaceyso Sacuudiga gacan ka geysteen inay taageeraan dowladda oo suurta gelisay in meelo badan laga qabsado Xuutiyiinta.
Kumaan dad ah ayaa ku nafwaayay colaadda, halka malaayiin kale oo dad ah ay ku barakaceen dagaalada ka socda Yemen sida ay shaacisay Qaramada Midoobay.
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay oo ka hadlay walaaca ku saabsan xaaladda deg degga ah ee dalka Itoobiya
Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka XFS waxay xayeysiineysaa shaqada Shan Boos